सम्झौताको अढाई वर्षपछि अप्टिकल फाइवरको काम सुरु, धुमधामको शिलान्यास किन ? « GDP Nepal
सम्झौताको अढाई वर्षपछि अप्टिकल फाइवरको काम सुरु, धुमधामको शिलान्यास किन ?
Published On : 21 May, 2019 4:10 pm
काठमाडौं ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण रनेपाल टेलिकमविचसंझौता भएको साढे२ वर्षपछि अप्टिकल फाइवर विस्तारकोकाम सुरु भएको छ। टेलिकमले २हजार १सय ७९किलोमिटर लामो अप्टिकल फाइवर विस्तारको काम सोमबारबाट सुरु गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धादिङबाट अप्टिकल फाइवरविस्तार शुभारम्भ गरेका छन्। ओलीले डिजिटल नेपाल अभियानका लागि अप्टिकल फाइवर विस्तारको कार्य एउटा खुड्किलो भएको भन्दै यसले विकासमा ठुलोटेवा पु¥याउने बताए।
कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीले चियो भञ्जयाङदेखी आरुघाटसम्मको काम सुरुवात भएको भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुर्वपश्चिम सडकखण्ड हुँदै सहरर सहरउन्मुख क्षेत्रलाई यो परियोजनाले समेट्ने बताएका छन्।
परियोजना सुरु गर्नमै ढिलाई भइरहेका बेला शिलान्यासका लागि धुमधामको खर्च गरिनुलाई भने गलत रूपमा लिइएको छ ।
सामसङको ट्रिपल रियर क्यामरायुक्त स्टाइलिस ग्यालेक्सी ए–२० एस बजारमा
काठमाडौं । नेपालको लोकप्रिय इलेक्ट्रोनिक्स एवं स्मार्टफोन ब्राण्ड सामसङले हालै ग्यालेक्सी ए२० एस बजारमा प्रस्तुत
सामसुङले ल्यायो ‘पावर अफ टेन’ अफरः ग्यालेक्सी बड्समा ५१ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सामसुङले आफ्नो स्मार्टफोनहरु पहिलोपल्ट बजारमा ल्याएको १० वर्ष पूरा भएको छ । यही
फाइभ–जीमा आक्रामक चीन, ८० हजारभन्दा बढी आधार स्टेसन निर्माण
बेइजिङ (एजेन्सी): चीनका प्रमुख तीन टेलिकम कम्पनीले इन्टरनेटको फाइभ–जी सेवा सञ्चालनका लागि ८० हजारभन्दा बढी